အနောက်ကမ္ဘာနဲ့ အစ္စလမ်လောကသားတို့ ရခိုင်အရေးမှာ ဘာလို့ တစ်သံတည်း ထွက်ကြသလဲ (Kyaw Zaw Oo) | MoeMaKa Burmese News & Media
အနောက်ကမ္ဘာနဲ့ အစ္စလမ်လောကသားတို့ ရခိုင်အရေးမှာ ဘာလို့ တစ်သံတည်း ထွက်ကြသလဲ
ကျော်ဇော်ဦး၊ Coral Arakan News၊ ဘာသာပြန်သည်၊
၂၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ ၊ Coral Arakan News ၊ [ ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး ]
(Photo – မြောက်ဦးမြို့ အလိုတော်ပြည့်ကျောင်း ရှိ ဒုက္ခသည်များက အလှူရှင်များအား အပြန်တွင် လှမ်းငေးနေကြပုံ)
(Fuadi Pitsuwan ရေးသား၍ ကျော်ဇောဦး ဘာသာပြန်သည်။ ရှုမြင်သုံးသပ်ချက် ရပ်တည်ချက်တို့မှာ မူရင်းဆောင်းပါးရှင်၏ အာဘော်သာဖြစ်ပါသည်။)
အမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားရဲ့ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ထောမတ်စ် ဒွန်နီလွန် က အိုဘားမား ကို ပြောတယ်။ မြန်မာသမ္မတဦးသိန်းစိန် နဲ့ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့နဲ့တွေ့တဲ့ အခါကျရင် ရခိုင်ပြည်နယ်က ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာတွေ ရဲ့ ဖြစ်အင် အတွက် ပူပန်မိကြောင်းကို ထုတ်ဖော်ပြသဖို့ လိုအပ် လိမ့်မယ်လို့ သူက အိုဘားမား ကို အကြံပေးတယ်။
တရားဝင်ထုတ်ပြန်တဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေအရဆိုရင် ပြီးခဲတဲ့လက နောက်ဆုံးအကြိမ် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူများစုနဲ့ မူဆလင် လူနည်းစုအကြား ပဋိပက္ခတွေမှာ လူ့အသက်ပေါင်း (၈၉)သက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးလိုလိုက ဒါကို သြော် . . . ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ နဲ့ မူဆလင်တွေ အကြား တိုက်ကြခိုက်ကြပေသကိုး လို့ မြင်ရုံမျှ မြင်နေကြစဉ်မှာ၊ တကယ့်အဖြစ်တွေက ဒါထက်မက ရှုပ်ထွေး နက်နဲလှတယ်။
ဒီပဋိပက္ခတွေရဲ့ချက်မဗဟိုမှာ သွားသွားမြင်ကြတာက ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာတွေကို (မြန်မာ)နိုင်ငံတော် က အကာအကွယ်မပေးဘူး ဆိုတဲ့အချက်ပဲ။ သူတို့တတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ မျိုးဆက်ပေါင်း များစွာ နေခဲ့ကြပြီဖြစ်သော်ငြားလည်း သူတို့ကို နိုင်ငံသားအဖြစ်အသိအမှတ်မပြုတဲ့အတွက် သူတို့ကို ဒီလို အကောအကွယ်မပေး တာဖြစ်တယ် လို့ မြင်နေကြတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာရခိုင်တွေကလည်း အဲဒီ ဘင်္ဂါလီတွေကို သံသယ မျက်မှန်စိမ်း နဲ့ ကြည့်မြင်ကြတယ်။ ဒီလူတွေဟာ တစ်ဘက် ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် ကနေ ခိုးဝင်လာတဲ့ ကောင်တွေ၊ ဒီနိုင်ငံမှာလာနေပြီး တိုင်းရင်း ရခိုင်စကား ဗမာစကား မပြောကြတဲ့လူတွေ၊ ဒီက ယဉ်ကျေးမှုကို လက်မခံကြတဲ့လူတွေ ရယ်လို့ပဲ မြင်ကြတယ်။
အဲ . . . မျှမျှတတ ဖြစ်အောင် ကျွန်တော်ကြားကနေ ၀င်ပြောရမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ် ကို ရိုဟင်ဂျာ ပါ လို့ ဆိုနေကြတဲ့လူ တော်တော်များများဟာ တကယ်လည်း ခိုးဝင်လာကြတဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ် ဗျ။ နောက်ပြီးတော့ ဘယ်သူက ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာ အစစ်အမှန်လဲ၊ ဘယသူတွေကရော ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှကနေ ခိုးဝင်ကူးပြောင်းအခြေချတဲ့ သူတွေ ဖြစ်နေသလဲ ဆိုတာ ခွဲခြားဖို့ရာ အလွန်အမင်း ခက်ခဲလွန်းလှပါတယ်။
ဒီပဋိပက္ခတွေအတွင်းမှာ ဗုဒ္ဓဘသာတွေဖက်ကနေ ပင်းပါတယ်လို့ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့တွေရဲ့စွပ်စွဲဖြင်းကို ခံရတဲ့ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေကို အခုထက် ပိုမိုပြီး ကောင်းကောင်းမွန်မွန် လူလူသူသူ ဆက်ဆံပေးဖို့အရေးကို မူဆလင်နိုင်ငံတွေက လိုချင်အားကြီးပြီး စိတ်ရောကိုယ်ပါ အိနြေ္ဒမရ ဖြစ်နေကြတယ်။
တူရကီဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့ဇနီး Emine Erdogan နဲ့ တူရကီနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Ahmet Davutoglu တို့ ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ်လအတွင်းက ရခိုင်ပြည်နယ်ကို လာရောက် လည်ပတ် တယ်။ ဒီခရီးစဉ်ကြောင့် ဒီ(ရခိုင်ပြည်နယ်)ပဋိပက္ခကို နိုင်ငံတကာမီဒီယာက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တင်ပြမှုတွေဖြစ်လာခဲ့ရပြီး၊ အစ္စလမ်မစ်ကမ္ဘာကလည်း ဒီအရေးကို အာရုံစိုက်မိလာခဲ့တယ်။
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ ဒုတိယသမ္မတအဖြစ်ဆောင်ရွက်ဖူးပြီးတဲ့အပြင် အင်ဒိုနီးရှား ကြက်ခြေနီ အဖွဲ့ကြီးရဲ့ လက်ရှိအကြီးအကဲအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေသူ Jusuf Kalla ဆိုရင် လည်း ဒီအရေးကို သူ့အတွက် တကယ့်မဟာတာဝန်ကြီးပမာ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် သတ်မှတ်ပြီးသကာလ၊ ဒီဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာ အရေးမှာ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ငြိမ်းငြိမ်း ချမ်းချမ်း ဖြေရှင်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ဆောင်ရွက်စေဖို့ရာ အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရက ဖျောင်းဖျရာမှာ ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့တယ်။
ဆော်ဒီအာရေဗီးယား ဆိုရင်လည်း ဒီပဋိပက္ခဟာ မူလဆင်ဘာသာဝင် ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာ တွေကို “လူမျိုးတုံး ရှင်းထုတ်သတ်ဖြတ်မှု (ethnic cleansing)” လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် ဆိုပြီး ရှုတ်ချလိုက်တယ်။ ဆော်ဒီဘုရင် အဗ္ဗဒူလာဆိုရင်လည်း ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာ တွေသက်သက် အတွက် ဒေါ်လာ သန်း ငါးဆယ်ဖိုး အကူအညီတွေ ပို့လိုက်တယ်လို့ ဆိုကြတယ်။
အဲ . . . နောက်တစ်ခါ အီရန်။ ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ် ဒီလိုဆက်ဆံနေမှုတွေကို အီရန်နိုင်ငံက ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပြောဆိုတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ “လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု(genocide)” ကို ရပ်တန်းကရပ်နိုင်အောင် မူဆလင်နိုင်ငံတွေနဲ့တကွ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေ က မြန်မြန်ထက်ထက် အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုတွေ ပြုကြဖို့ တိုက်တွန်း ဆော်သြတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ အိုအိုင်စီ။ အစ္စလမ္မစ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ကြီး၊ အင်္ဂလိပ် လိုကတော့ The Organisation of Islamic Cooperation (OIC) လို့ခေါ်တယ်။ မူဆလင် နိုင်ငံပေါင်း (၅၇)နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ ဒီအဖွဲ့ကြီးဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို အဆင့်မြင့် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တစ်ဖွဲကစေလွှတ်ပြီး ဒီအရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ စကားပြောစေတယ်။ ဒါ့တင်မက ဒီအရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ စဉ်ဆက်မပြတ် ပြောနေဆိုနေဆဲလည်းဖြစ်တယ်။ အိုအိုင်စီရဲ့ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးရဲ့ ပြောစကားတွေအရဆိုရင်၊ အိုအိုင်စီဟာ အိုဘားမားမြန်မာပြည်ကို အလည်အပတ် မလာခင်ကကို သမ္မတအိမ်ဖြူတော်ဆီ စာတစ်စောင် ပို့ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အဲသည်စာထဲမှာ အမေရိကန် သမ္မတ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ ပထမဆုံး မြန်မာနိုင်ငံကို အလည်အပတ်ရောက်ရှိခြင်း အနေနဲ့ သမိုင်းဝင်လာမယ့် အဲသည်ခရီးစဉ်မှာ သမ္မတအိုဘားမားအနေနဲ့ ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာ အရေးကို ထုတ်ဖော်တင်ပြပြောဆိုဖို့ရာ အိုအိုင်စီက တိုက်တွန်းထားတယ်။
အခြေအနေတွေကို လှမ်းကြည့်လိုက် . . . ။ မူဆလင်ကမ္ဘာရဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို အရင့်အရင်က တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးတဲ့ စုစည်းမှုမျိုးနဲ့ မြင်တွေ့ရတယ်။ မူဆလင် ပြည်ထောင်တွေဟာ အသံတစ်သံတည်း နဲ့ အော်နေကြတယ်။ အဲသည် အသံကလည်း လူ့အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ပေး ဖို့ ပြောနေတာ ဖြစ်နေ ပြန်တယ်။
ဒီမူဆလင်နိုင်ငံတွေထဲက တချို့သောနိုင်ငံတွေဟာ ဒီ(ဘင်္ဂါလီ)အရေးကို အသုံးချပြီး မိမိတို့နိုင်ငံတွေ ကိုယ်နှိုက်ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာမူဝါဒတွေ ချွတ်ချော် လွဲမှားနေတာ ကို အာရုံလွဲနိုင်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့သဘောလည်းပါတယ်။ ဒီတော့ ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ ဖြစ်အင်ဟာ မူဆလင်နိုင်ငံတွေအတွက် အကျိုးတူဖြစ်ထွန်းစေတဲ့ ဘုံ အနေအထား တစ်ရပ်ကို ဖော်ဆောင်လိုက်ပါတယ်။ ဒါအပြင် ပိုအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်က၊ အခုပြောနေတဲ့ မူဆလင်နိုင်ငံတွေရဲ့ အခုတူညီနေကြတဲ့ အကျိုးစီးပွားတွေဟာ အနောက်ကမ္ဘာအနေနဲ့ အစဉ်အလာအားဖြင့် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြတဲ့ စံတန်ဖိုးတွေဖြစ်နေပြန်တယ်။ (ဥပမာ လူ့အခွင့် အရေး ဆိုတာမျိုးပေါ့။)
ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကတော့ အမေရိကန်အတွက် ပွပေါက်တိုးတာပါပဲ။ ဒီလိုအခွင့်အရေး မျိုးကို လုံးဝကို လက်လွတ်ခံလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ မူဆလင်နိုင်ငံတွေ များများစားစားနဲ့ အခုလို သဘောထားချင်း တိုက်ဆိုင် နေကြတဲ့ ကြုံတောင့်ကြုံခဲအနေအထားမှာ စကားလေး ဘာလေး ၀င်ပြောလိုက်မှ ဖြစ်မှာပေါ့။ ဒါမှ နောက်များ အာရပ်-အစ္စရေး ပဋိပက္ခတို့ ဘာတို့ကျရင် ဟိုလိုလို ဒီလိုလို အီးယောင်းဝါးခွင့် သာမှာပေါ့။
တူရကီ ဆိုတဲ့နိုင်ငံကလည်း ကိုလူလည်။ တူရကီအစိုးရကို ဝေဖန်ပြစ်တင်သူတွေကို ကာ့ဒ်လူမျိုး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကို တူရကီအစိုးရက ပယ်ပယ်နယ်နယ် ဆော်ပလော်တီးတဲ့အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့မေးခွန်းတွေအမေးခံရရင် တူရကီဟာ ရွာကို ပတ်ပြေးပြီး ရှောင်ပုန်းနေတတ်သူ ဖြစ်တယ်။
အင်ဒိုနီးရှားကျတော့ သူတို့နိုင်ငံက ခရစ်ယန်လူနည်းစုတွေကို ဘယ်လိုခွဲခြားဆက်ဆံ သလဲ ဘယ်လိုနွှာသလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရောက်ရင် အင်းမလုပ် အဲမလုပ်နဲ့ မြုံစိစိ လုပ်နေတတ်တဲ့နိုင်ငံ ပေါ့။
ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားကျတော့ သူတို့နိုင်ငံက အမျိုးသမီးတွေအခွင့်အရေး ဆုံရှုံးနေရတဲ့ ကိစ္စတွေ ကိုရှောင်တယ်။ မပြောဘူး။ အီရန်ကျတော့ (ဆီးရီးယားသမ္မတ) အာဆဒ် အစိုးရ လက်ထက်မှာ လူတွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ခဲ့တယ် ဆိုတာ သိသိကြီးနဲ့ ဆီရီးယားအရေးမှာ ၀င်မစွက်ပါနဲ့ ဆီးရီးယားအရေးမှာ ၀င်မစွက်ပါနဲ့လို့ တကျော်ကျော် အော်တဲ့ နိုင်ငံမျိုးဖြစ်တယ်။
အေး . . . ၊ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုနိုင်ငံတွေအကုန်လုံးဟာ ဒီနေရာကျမှ ရုတ်ချင်း မေတ္တာဓါတ် တွေ ကြီးမားလာပြီး မူဆလင်ဘာသာဝင် ဘင်္ဂါလီရိုဟင်ဂျာတွေဟာ အခြေခံ လူသား အခွင့် အရေးတွေရရှိဖို့ ထိုက်တန်သူတွေ ဖြစ်ပါတယ် ဆိုတာတို့၊ မြန်မာ အာဏာပိုင် တွေ အနေနဲ့ ဒီထက်ပိုပြီး ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံဖို့ကောင်းပါတယ် ဆိုတာ တို့တွေ ဘာတွေ ပြောကုန် ကြပါလေရော။
မူဆလင်(ဘင်္ဂါလီ)ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ ခံစားနေရတဲ့ဖြစ်အင်အတွက် အမေရိကန်အနေနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှု ရှိနေပါတယ် ဆိုတာကို ပြောလိုက်ခြင်းဟာ အမေရိကန်ဟာ မူဆလင်ကမ္ဘာ နဲ့ ရန်ဘက်အနေအထားမှာ ရှိမနေပါဘူးလို့ ပြလိုက်ရာရောက်ပါတယ်။ မူဆလင်နိုင်ငံ တွေနဲ့ လက်တွဲပြီးတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လူ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားမှု နဲ့ မတူကွဲပြားမှုကို သည်းခံနိုင်မှုတို့ တိုးတက်ထွန်းကားအောင် လုပ်ဆောင်နိုင် ဖို့ရာ မူဆလင်နိုင်ငံတွေနဲ့ လက်တွဲလုပ်ဆောင် နိုင်မယ့် ဒီအခွင့်အလမ်းကို အမေရိကန် အနေနဲ့ မလွတ်တမ်း အသုံးချနိုင်ခွင့်ရှိလာပါတယ်။
မနေ့က (ဆိုလိုတာက နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့က) ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ မိန့်ခွန်းပြော တဲ့အခါ၊ ဘယ်လို မျိုး ဆင်ခြေဆင်လက်တွေနဲ့မျှ အပြစ်ကင်းတဲ့ လူတွေကို အပြစ်မရှိတဲ့ လူတွေကို အကြမ်းမဖက်ရဘူး ဆိုတာကို ပြောပြီးသကာလ? ဘာသာကွဲ အုပ်စုကွဲတွေကြား မငြိမ်မသက်ပဋိပက္ခကို ရပ်စဲကြဖို့ မစ္စတာ အိုဘားမားက တိုက်တွန်း သွားခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီပဋိပက္ခကို ကမ္ဘာကြီးက တုံ့ပြန်ကြရာမှာ တူညီစွာ ထားရှိကြ တယ်လို့ ပေါ်ပေါက် တဲ့၊ လောကအလယ်မှာ ပွင့်လန်းလာတဲ့ ဓမ္မပါလ တရားတွေ တန်ဖိုးစံတွေကို ဒီထက် မက ဖွံ့ဖြိုးအောင် အမေရိကန်သမ္မတ က ဆက်လက် လုပ်ဆောင် သွားသင့်ပါတယ်။ (အေး . . . ဟုတ်တော့ ဟုတ်တာပေါ့၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့ မိမိတို့ဟာ ဒီအရေးမှာ အသုံးချခံသွားရတဲ့ လူတွေလို့ မိမိတို့ကိုယ်မိမိ မခံစားမိရ လေအောင် အိုဘားမားအနေနဲ့ နုညံ့သိမ်မွေ့စွာကိုင်တွယ် လုပ်ဆောင်သွားရ မှာပေါ့ လေ။)
အစ္စလမ်ကမ္ဘာ နဲ့ အနောက်ကမ္ဘာတို့ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ တူညီတဲ့ဆုံမှတ်တစ်ခုကို ရှာမယ်ဆိုရင် ရှာတွေ့နိုင်ကြပါတယ်။ အစ္စလမ်ကမ္ဘာ နဲ့ အနောက်ကမ္ဘာတို့ ရဲ့ ပြန်လည်ချစ်ကြည်ပေါင်းစည်းနိုင်မှုဆီကို သွားရာလမ်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနောက်ဘက် အစွန်ဆုံးက ကြမ်းတမ်း ခက်ထရော် လှတဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေ ဖြတ်သွားတယ်လို့ပဲ ပြောမယ်ဆို ပြောလို့ ရနိုင်ပါတယ်။
စာရေးသူ ဖူအဒိ ပစ်ဆူဝန် (Fuadi Pitsuwan )ရဲ့ ဒီဆောင်းပါးကို ဒီ ဘန်ကောက်ပို့စ် မှာ မဖော်ပြခင် Pacific Forum CSIS Pacnet series မှာ ပုံနှိပ် ဖော်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းဆောင်းပါး အမည်က West, Islam can unite over Rohingya cause ဖြစ်ပြီး၊ အောက်ပါ လင့်ခ် မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
2 Responses to အနောက်ကမ္ဘာနဲ့ အစ္စလမ်လောကသားတို့ ရခိုင်အရေးမှာ ဘာလို့ တစ်သံတည်း ထွက်ကြသလဲ (Kyaw Zaw Oo)
မောင်ပျာလောင် on November 27, 2012 at 2:00 pm
မြန်မာတိုင်းရင်းသားမဟုတ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို အစ္စလမ်နိုင်ငံတွေကလက်ခံမယ်ဆိုရင် မြန်မာသမတကြီးက ခွင့်ပြုမယ်လို့ ပြောပြီးသားဘဲ၊ ဘာပြုလို့ လက်မခံကြတာလည်း ? ။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မြန်မာဒုက္ခသယ်တွေကို တတိယနိုင်ငံထွက်ဖို့ အတွက် ထိုင်း လ၀က ကခွင့်ပြုမှထွက်လို့ ရပါတယ်။ UN ကဒုက္ခသည်အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးတာ
တောင် ထိုင်း လ၀က ကခွင့်မပြုလို့ မြန်မာဒုက္ခသည်တွေ တတိယနိုင်ငံကိုထွက်မရတဲ့လူတွေအများကြီးပါ။ အဲဒါကြတော့ ဘာမှမပြောကြဘဲ၊ ထွက်ခွင့်ပေးနေတာကို မထွက်ဘဲ၊ မြန်မာစကားလည်းမပြော၊ ဘင်္ဂါလီစကားဘဲပြောတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ
အစ္စလမ်နိုင်ငံတွေသော်ဌင်း ဘင်္ဂလားဒစ်နိုင်ငံကို သွားကြပါတော့လား။
ကြေးတောသား on November 29, 2012 at 12:37 pm
သမတသိန်းစိန်၊ထိုင်းနိူင်ငံ၊ဘားရက်အိုဘားမားနှင့်အိုအိုင်စီ တွေကဘာသာရေးနှင့်လူ့အခွင့်အရေးရှိချင်ယောင်ဆောင် ကြတာဘဲရှိတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရအောင်လို့ပါ။ထာဝရဘုရားသည်ပညာအတတ်ကိုစောင့်၏။ပြစ်မှားသောသူ၏စကား ကိုချေတော်မူ၏။